> Resource> Video> ehichapụ Movie Iweghachite: 3 Nzọụkwụ naghachi ehichapụ Movies
Olee Otú M Pụrụ Naghachi ehichapụ Movies?
M ehichapụ m niile na fim ndị ịgbanwee + Hichapụ na mberede. Ha bụ ndị banyere 30 GB nke ọkacha mmasị m na fim. M otú akwa ụta ugbu a. Biko nyere m aka iji naghachi! Ihe ọ bụla echiche?
Ndị ehichapụ fim na-adịghị arahụ na-adịgide adịgide n'ezie. Ha dị nnọọ ibu keerughi. Ha ga-efu ruo mgbe ebighị ebi mgbe ọhụrụ data na-edochi ohere ha na-eji aka ịchọta. Nke a pụtara na ị pụrụ naghachi gị ehichapụ fim ka ogologo oge ị na-enwebeghị ọhụrụ data n'ime gị mbanye.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a-atọ ndị ọzọ mgbake omume na-enyere gị iji naghachi fim na ala, n'agbanyeghị gị fim na-efu ruru mberede nhichapụ, virus agha, usoro okuku ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows kọmputa / Mac, dijitalụ igwefoto, mpụga nchekwa na ngwaọrụ, ekwentị, USB flash mbanye na ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ. The ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery bụ maka na ị ka iṅomi ngwaọrụ gị mere na ị nwere ike ịlele ma hụrụ na fim bụ ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery ugbu a.
Igosi ehichapụ Movie Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ebe a ka na-naghachi na fim ndị Windows version nke Wondershare Data Recovery. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike naghachi ihe nkiri na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Launch usoro ihe omume ma họrọ mgbake mode
Mgbe launching Wondershare Data Recovery, ị ga-ahụ a Ohere dị ka n'okpuru ngosipụta. Ị ga-awa na 3 mgbake ụdịdị. Naghachi ehichapụ fim, ka na-agbalị "Echefuola File Iweghachite" mode ọnụ.
Rịba ama: The ọzọ abụọ mgbake ụdịdị ndị bara uru kwa, ma ha na-ogologo oge ka iṅomi ha na-anaghị enye mbụ faịlụ aha na scanning N'ihi.
Nzọụkwụ 2 iṅomi ike mbanye ma ọ bụ kpọmkwem nchekwa ebe ị na-ehichapụ gị fim
Usoro ihe omume ga-depụta niile partitions na ejikọrọ nchekwa ngwaọrụ na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa họrọ onye ị chọrọ iji weghachite fim na pịa "Malite" ka iṅomi maka ehichapụ fim. I nwekwara ike "Kwado Deep iṅomi" ka mma scanning N'ihi.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ehichapụ fim mpụga nchekwa na ngwaọrụ, biko jide n'aka na ngwaọrụ nwere ike-ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Tulee nkiri aha na naghachi fim selectively
Mgbe iṅomi dị n'elu, niile hụrụ faịlụ ga-egosipụta na edemede na ụzọ. Ị pụrụ ịchọ gị fim aha na search mmanya. Mgbe ịlele fim ị chọrọ weghachi, ị nwere ike pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara fim azụ ya mbụ ọnọdụ, ma ọ bụ ha ga-overwritten.
Olee otú ime Draịvụ Data Recovery maka Win na Mac OS X
Olee otú Ịnapụta Lost Videos na Video Iweghachite Software
Top 20 Vine Ideas Iji mee ka gị Vine Video kwụpụta
10 Fun Facts banyere Vine
Adobe Premiere System chọrọ: otú melite Computer maka Premiere
Top 10 Kasị anya YouTube Videos nke 6 Genres na onye ọ bụla Week nke 2014
Olee otú m tọghata M4P ka MP3
Olee otú Download eBaumsWorld Videos na a Click
Olee otú Download Myspace Playlist effortlessly